Yoko Ubude ™ Dual Sole 2013 New amasu | Call: 09897304484
ikhaya leYoko & Oka Work?ukuphakama Isimisoakhule zinde?Testimonialoda ManjeXhumana Nathiamathiphu
Tired Of Sokuba iDemo? Ufuna Khulisa Njengoba abade Njengoba Abangane Bakho? Enethemba ukuzuza Labo Extra Zimbalwa amasentimitha & Self-Confidence?
Thola The Revolutionary Height Yandisa yedivayisi esingasiza You Wanda zinde And Ukwandisa Height Your kulindelekile In Just 3 Months ... okuqinisekisiwe!
Ukuphakama Khuphula Imikhiqizo
Esikhathini esidlule yamuva , izinto Asian ziye strived ekufezeni esabela izinkinga ezivamile zenhlalo okhululayo amalungu emphakathini . Ngo inqubo wemisebenzi yabo ezintsha , izazi ezithile ziye i- amathe isihlangu ukuthi okusiza abantu emzimbeni iDemo . Lezi ematheni isihlangu , iziphi kabanzi njengendlela Yoko and Oka ukuphakama nokwanda amadivaysi ziye kwakuqala ukwanda okukhulu Asian ngisho nalo lonke jikelele . It usebenza nge imigomo ethile ubuchwepheshe Chinese asekelwe nomqondo reflexology in ukutshobha . Ngaphakathi imakethe Asian , lokhu isihlangu ubizwa imakethwa njengendlela increaser ukuphakama . Ngombono ezingokoqobo , it kukhule ngempumelelo ukuphakama bomzimba labantu babo bonke ubudala kwabesilisa nabesifazane . Ngokungafani ukusetshenziswa ukukhula hormone womuntu , Onjiniyela bayo bagcizelela ukuthi idivayisi isebenza ebheke ziyanda ukuphakama kothile ngaphandle ibangela yini imiphumela emibi .
Ngombono yemvelo , umzimba ukuphakama ilawulwa ukuthuthukiswa amathambo eside abakha nohlaka lwamathambo . Ukulungiswa ngobukhulu kanye shape kwala mathambo eside kuncike ekunikezelweni kwelungelo nethonya hormone sokukhula . Lezi hormone Ukukhula kuthiwa akhishelwa yi- pituitary grand phezu yokwamukela imiyalelo zobuchopho . Ngabanye ngokuvamile ukwandisa ukuphakama ngokusebenzisa yokuthomba kuya cishe 25 edlule. Ezimweni ezithile , ukukhula uyama ngaphambili lapho umuntu kwafinyelela ephakeme kakhulu ezivamile . Lesi simo kwenzeka ngenxa yokuthi indlala onesibopho eyeka ukukhulula hormone ukukhula , yingakho abangela amathambo ezama ukuhlanganisa ndawonye ekuvimbeleni okunye ukwanda ukuphakama . Kulo mongo , ukuphakama Yoko ukwandisa isihlangu imisebenzi ngokuthatha isinyathelo kuqala ukukhululwa hormone ukukhula by the nezindlala pituitary . Isimiso somzimba vertebral we esigabeni umzimba womuntu oyinginindi uhlala asinazo fusing kukho konke ukuphila komuntu . Lokhu kusho ukuthi le isihlangu ezivusa ukukhula amathambo eside sigaba , okuholela ukuphakama ukwanda .
Ngaphandle imiphumela elongation ngokuqondile mpo uhlelo vertebral , Yoko no Oka ematheni kuthuthukisa impilo enhle ngokwenza lula kwegazi emzimbeni , ngcono ukugaya bese kamuva babangela ukudla umzimba rates . Lokhu kusho ukuthi umzimba ziyoba umsoco omningi ukuze usetshenziselwe ukukhula kanye nentuthuko ngezinhloso . Phakathi umsoco isivikelo zihlanganisa izinto ezinjenge -calcium phosphorus , okuyizinto ezibalulekile ekwakhiweni isakhiwo oqinile lwamathambo . Kulokhu , lo sici ngcono umzimba yezempilo futhi umzimba isilinganiso inikeza izingxenye eyengeziwe ukuphakama ukwanda . Okwamanje usesimweni , singabona iqiniso lokuthi bobabili Yoko and Oka ematheni ukusebenzela esihlanganisa nempilo eziningana kanye nezici kwama-hormone in ukuqala vertebral inqubo yokukhula .
Yoko ukuphakama increaser iza oluthile ematheni plastic igqoke ngaphansi isihlangu . Ngakolunye uhlangothi , Oka kuba i insole ibekwe ngaphakathi isihlangu . Zombili lezi amadivaysi enze imisebenzi inkanuko nezindlala elibhekele ukukhishwa kwama-hormone sokukhula . Ukuze ayokwenza kwempendulo abalulekile , abasebenzisi kumele afake ematheni imizuzu okungenani 40 ngosuku , futhi lapho ehamba ngejubane ukusheshisa . Ngakho-ke , yonke into izidingo zabantu ngabanye ukuba ukwenze nje ukugqoka le yedwa uhambe . Inhloso eyinhloko ukuqinisekisa ukuthi ematheni ngaphakathi isihlangu Ufika inkanuko njengesinye kwenza ukuhamba intuthuko . Imiphumela ungaqala nokubonisa esikhathini sezinyanga ezintathu . Ngokuba esiphezulu imiphumela ezifiselekayo , ematheni ingafakwa ezifakwa izinyanga ukwenza i 12 . I am 28 no baye bayeka esikhulayo minyaka 6 minyaka. Ngemva kokusebenzisa umkhiqizo wakho, sengiqalile elikhula futhi! Yeka indlela emangalisayo
Ngithanda ukusho umkhiqizo wakho kuyinto amangalisayo. Ngibé kusuka 5 "ezinyangeni 2 10 ago 6" 1. Angikholwa it. Yoko ongezansi ngempela.
Chofoza ukuze ufunde imininingwane
Uma ufuna ukuba ukhule zinde, funda lokhu...
Izinkulungwane ubufakazi Scientific and medical.
FREE "Ubude Gain Ukuzivocavoca" eBook
Konke usekelwe By a. . . 100% ZERO Risk Guarantee. Plus uqhubeka wonke Amabhonasi
Izizathu kungani kufanele uqale ngokusebenzisa i Yoko
ikhaya le Ingabe Yoko & Oka Sebenza kanjani? ukuphakama Isimiso Ufuna akhule zinde? kobufakazi oda Manje Xhumana Nathi Inqubomgomo yemfihlo
Copyright 1994, Kulungile agodliwe ngu www.yokoheight.org